Hidha Haaromsa Itoophiyaa: Masriin Abbayaarratti 'humnaafi murannoo' qaba jette - BBC News Afaan Oromoo
Hidha Haaromsa Itoophiyaa: Masriin Abbayaarratti 'humnaafi murannoo' qaba jette
Image copyright Fana
'Masriin mirgoota Laga Abbayaarratti qabdu eegsifachuudhaaf humnaafi murannoo qabdi,' jechuun Ministeerri Dhimma Alaa biyyatti paarlaamaatti himuu ahramonline gabaaseera.
Akkaataa Hidhi Haaromsa Itoophiyaa bishaaniin guutamuu qabu irratti Itoophiyaa waliin waldhabdeerra yeroo jirtu kanatti, Masriin Baankiin Addunyaa akka gidduu galuufis gaafatteetti.
Ministirri Dhimma Alaa Masrii Saamii Shukurii kaleessa yeroo paarlaamaa irratti haasaa taasisan ''Itoophiyaan opereshiniishee itti fuftee jirti'' jedhan.
Pirezidaanti Saahilawarq waa'ee Laga Abbayyaa maal jedhan ?
'Ejjennoon Masirii sarara diimaa Itoophiyaan keesse kan darbudha'
Hidha Haaromsaa kana bishaan guutuu itti fufuun ishee fudhatama hin qabu. Kun walii galtee irra ga'ame kan diiguufi naannicha keessatti tasgabbiin akka hin jiraanne gochuu keessatti dhiibbaa hin malle qabaata," jedhan.
Itti dabaluudhaan: "Hawaasni addunyaa furmaata hundi irratti walii galuu danda'u maddisiisuudhaan dirqama isaanii akka bahaniifis waamicha dhiyeessaniiru," jechuun Reuters gabaaseera.
Akka ahramonline, gabaasetti "Baankiin Addunyaa qaama sadaffaa ta'uun garaa garummaa jiru akka furuuf Masiriin yaada dhiyeessiti," jechuun Ministira Dhimma Alaa biyyattii eeruun gabaaseera.
Ministiroonni bishaan Itoophiyaa, Masriifi Sudaan Fulbaana 23fi 24 akkaataa Hidhan Haaromsaa Laga Abbayaa kun itti guutamuu qabuufi gadhiifamuu qaburratti marii taasisaniin booda Masiriin araarsituun idil-addunyaa akka gidduu seenaniif waamicha dhiyeessitee ture.
Itoophiyaan gamasheetiin qaamni sadaffaan gidduu seenuun waliigaltee jajjabeessaa biyyoonni sadan irra ga'an diiguu dabalatee waliigaltee Bitootessa 2017 mallatteessan kan cabsudha jechuudhaan qaamni sadaffaa gidduu seenuu akka hin fudhanne ibsiteetti.
Saamii Shukurii kaleessa yeroo paarlaamaaf haasaa taasisanitti, "Masriin faayidaa Laga Abbayaarraa argattu dabarsitee hin kennitu," jechuu isaanii ahramonline gabaaseera.
"Itoophiyaan] bishaan bokkaarraa meetir kuubii miliyoona 630 argatti, kun ammoo lageen 10 osoo itti hin dabaliinidha. Masiriin garuu hir'ina bishaaniitiin rakkoo keessa galteetti. Dhimmi bishaan Laga Abbayaa Masiriifi dhimma du'aafi jireenyaati," jechuun parlaamaatti dubbatan.
Ministirri Dhimma Alaa biyyattii Saamii Shukurii, Sudaan akka biyya isaanii waliin tumsan waamicha dhiyeessaniiru. "Uummata obbolaa waan taaneef qofa osoo hin taane, Hidhaan Haaromsaa Itoophiyaa Masirii qofa osoo hin taane Sudaaniinillee ni miidha," jedhaniiru jechuun gabaafame.
Dabalataan, Paarlaamaan Masrii koree yeroodhaaf dhimma Hidhaa Haaromsa Itoophiyaa kana hordofu hundeessuun isaas himameera.
Hidhaan Haaromsa Itoophiyaa akkaataa itti ijaaramuufi bishaan itti guutamurratti mareen biyyoota sadaniin waggoota afuriif taasifamaa ture bu'aa akka hin buusne Saamii Shukuriin dubbachuun isaanii ni yaadatama.